Diblomaasi Yurubiyaan ah oo ka yaabay wasakhda taalla caasimadda loo soo bedalay - Bulsho News
Axmed Macallin Fiqi: Arrimaha aniga iyo Qoor Qoor aan isku...
Diblomaasi Yurubiyaan ah oo ka yaabay wasakhda taalla caasimadda loo soo bedalay
Khashin daadsan wado ku taalla caasimadda Monrovia
Madaxa hawlgalka Midowga Yurub ee Liberia ayaa sheegay inuu ka yaabay sida ay u taallo caasimadda Monrovia, in kastoo dhaqaalo badan lagu bixiyay in la nadiifiyo isla markaana la wanaajiyo bilicdeeda.
“Monrovia waa caasimad laga yaq-yaqsoodo, waa mid aad u wasakh badan,” ayuu ka sheegay kulanka lagu marti qaaday.
“Inta caasimadood ee aan ka tegay Afrika ee aan horay uga soo shaqeeyay, ma arag caasimad ka ustag badan tiina,” ayuu hadalkiisa raaciyay.
Wuxuu ugu baaqay maamulka caasimadda in wax laga qabto xaaladda ay ku sugan tahay Monrovia, isla markaana lo soo bandhigo halka ay ku baxaan lacagaha deeqda ah iyo canshuurta laga qaado ganacstada.
“Caasimad nadaafadeeddu wanaagsan tahay waah anti, waxay abuurtaa shaqooyin badan, waana taa waxa ay hadda u baahan tahay Liberia,” ayuu hadalkiisa raaciyay diblomaasi Delahousse.
Ergaygan aan hadalka la gabban ayaa sidoo kale tilmaamay in dhibtu aanay ahayn nashqadeynra caasimadda ee loo baahan yahay in wax badan laga qabto xaaladda faya dhowrka oo ah mid liita.
Duqa caasimadda Monrovia, Jefferson Koijee, isla markaana ah gudoomiyaha garabka dhalinyarada ee xisbiga talada haya ee CDC, ayaa sheegay in culeyska ugu badan ay kala kulmayaan maareynta khashinka, maadaama ay dad ka badan intii loogu talogalay ay ku nool yihiin caasimadda.
Wuxuu intaa raaciyay inay kaalmo dheeraad ah uga baahan yihiin deeq-bixiyayaasha uu kamidka yahay Midowga Yurub si ay u xakameeyaan dhibaatadda wasakhda caasimadda Monrovia.
Inkastoo ay deeq-bixiyayaasha dhaqaalo badan geliyeen hagaajinta bilicda Monrovia, ayaa haddana waxaa wadooyinka caasimadda iyo weliba goobaha muhiimka ah lagu arkaa khashin tuban, oo xitaa aan laga qaadin maalmaha shaqada.
Caasimadda Monrovia oo dhacda xeebta badda Atlantic ayaa waxaa ku nool dad ka badan milyan iyo bar qof, taasoo qiyaastii u dhiganta ku dhawaad 30% shacabka Liberia.
Midowga Musharaxiinta oo dalab xasaasi ah u diray...
‘You can queue for a whole shift’: the...
Howlgalo ka dhan ah Alshabaab oo ka dhacay...